Me Ihe Omume Igwefoto Na-aga na Klas - OMG Solutions
Programme Mmemme Igwefoto Na-eyi Egwuregwu Ahụ na Klaasị
Igwefoto ahụ a na-eyikwasị n’elu ahụ́ anọwo nwa oge ma nwee ọfụma, n’ime afọ ole na ole gara aga. Ndị ụlọ omebe iwu ahụ ọkachasị ndị uwe ojii mere nyochakwuo gbasara etu enyemaka mbido igwefoto ahụ siri nyere aka. Enweela mkpa ịbanye ọnọdụ a kpamkpam, kagbuo ụfọdụ omume ebe na-emegharị ụfọdụ ndị ọzọ. Nnukwu ihe ịma aka nke na-abịa mgbe niile gbasara igwefoto ahụ bụ oge okwu nzuzo na enweghị ntụkwasị obi n'ihe a na-eme na vidiyo vidiyo na njedebe. N'ide ihe odide a, anyị ga-atụle uru ndị mmadụ ghọtara site na igwefoto ahụ yana echiche a na-eso ya ga-edozi ya ngwa ngwa. Ndị a n'ozuzu na-enye nkwenye dị ukwuu nghọta nke na-egosi omume ndị na-ekwe nkwa na ihe mmụta a na-amụta.
Uru nke iji igwefoto eyi
N'ime ndị uwe ojii ebe eji igwefoto eji eyi, enwere uru ụfọdụ ha na-ekwu na igwefoto ahụ na-eweta na nghọta a n'ozuzu na-ewetara ọha mmadụ. Offọdụ n'ime uru ndị a gụnyere:
Akwukwo ozi nke ọkwa: uru ihe akaebe dị ugbu a maka nyocha yana nke ikpe, emeela ka ọ dịkwuo mfe ịga n'ihu. Ozugbo enwetara ihe ngosipụta zuru oke site n’ịkwụ ụgwọ ma gosipụta ya, ọ na - adịrịrị mfe ikpebi n’okwu ndị a.
Ngosipụta nke ụlọ ọrụ: site na ikwe ka ọha na eze nwee ike ịnweta ihe ngosi vidiyo na ihe nkiri eserese, mmekọrịta dị n'etiti ọha na eze na ndị uwe ojii siri ike ugbu a karịa mgbe ọ bụla. Ugbu a ọha na-ahụ na ndị uwe ojii zuru oke ma dị njikere igosi ha ihe niile metụtara otu ikpe, ọ meela obodo ntụkwasị obi na ha.
Ọnọdụ ọgụ: ndị mmadụ ịmara banyere onwe ya na-ewulite mgbe ha matara na-edekọ ha enyerela aka ịzụlite ezigbo omume na ndị nkịtị na ndị uwe ojii. Onye ọ bụla chọrọ ime nke ọma ma rube isi nke ọma mgbe ha mara na-edekọ ha, onye amaghị ihe ọkwa nyocha ọ nwere ike iji mee. Ọ kachasị mma izere omume ọjọọ naanị iji zere nsogbu ndị ọzọ.
Ifyingmata ma mezie nsogbu nke ụlọ ọrụ dị n'ime ahụ: iji ihe eji eme cams emeela ka ọ dịkwuo mfe ịchụpụ anụ ọjọọ site n'ike, nke a gụnyere ndị gụnyere; jiri ike ha megbuo, jiri uwe ndị uwe ojii nweta nchụnta ego, jiri uwe maka mmebi iwu ma ọ bụ wayo na-ejikwa baajị ha iji nweta iwu na-ekwesịghị ịdị na ebe ha ekwesịghị ịdị. Inwe kamera ahụ na - enyere aka inyefe ihe ndị a niile ma nwee ike itinye ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị.
Mkpebi ihe ndị banyere ndị uwe ojii na mkpesa: O nwere oge mgbe a na-ebo onye uwe ojii ebubo ebubo ọ ga - esiri gị ike ikpe onye na - ekwu eziokwu. N'iji ozu ahụ, ọ na - adịrị mfe igbochi ụdị azụmaahịa nke nwere ike iwepụ otu n'ime ndị otu abụọ a metụtara. Inwe ihe akaebe dị ka ndị a nwere ike inye ezigbo ndekọ nke ihe mere.
Arụ ọrụ ndị uwe ojii: A na-emeziwanye ọrụ niile ndị uwe ojii na-arụ nke ọma ebe ọ bụ na mmadụ ịmara onwe ya na-abawanye nke ukwuu mgbe ahụ ndị ọrụ uwe ojii na-eme omume ha mgbe niile n'ihi ya na-akwalite omume ọma mgbe niile. Ime ka onye isi na-ahụ maka ọzụzụ na usoro dị irè ma na-adịchaghị ike.
Ntụle amụma na nkwanye
Ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ mepụtara atumatu ederede zuru oke tupu mmejuputa mmemme igwefoto eyi. Inwe usoro iwu ndị a na-eduzi n'iji igwefoto ahụ na-eyi bụ ihe kachasị mkpa, nsogbu nwere ike ibilite site na mmejuputa ahụ ozu ahụ dịka ọtụtụ nsogbu ọkachasị nsogbu nzuzo. Ka emeghari atumatu ndi a, ha gha aghaghi iru n’otu iji nye aka nke oma ma dikwa ntukwasiri uche ma n’abali ka enye ohere ka imeghari ihe dika ihe atumatu a n’agha. N'oge mmepe nke iwu ndị a, ọ dị ezigbo mkpa ịnwe ndị na-ahụ maka ọrụ, ndị ndụmọdụ gbasara iwu, ndị uwe ojii, ndị ọka iwu, ndị obodo na ndị isi ihu dị ka nke a bara uru. Ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị ahụ ime ka usoro iwu dị maka ọha na eze.
Enwere ọtụtụ nchegbu nke igwefoto ahụ na-eyi uwe elu na-ebilite n'ihi na ụlọ ọrụ ahụ ga-eburu n'uche ka ha na-akọwa usoro ha. Otu n’ime ọtụtụ ihe ekwesịrị ịmapụta bụ na na nzuzo na mmekọrịta obodo, atụmanya nke igwefoto mepụtara na-akpata nchegbu ndị ọrụ uwe ojii welitere n’iru ọrụ ma emesịa ụgwọ ego ya. Ihe ndị a bụ nkwenye dabere na nyocha nke PERF na office cops. Ndị ụlọ ọrụ na-anabata ha kwesịrị ka ha daba na mkpa nke onwe ha, akụrụngwa, iwu chọrọ yana kwa usoro ọgụgụ isi ha. Aro ndị a bụ:
Ekwesịrị ka ahapụ ndị ọrụ nyocha vidiyo vidiyo nke ihe mere na ha tupu ha ekwupụta ihe merenụ, Onye uwe ojii na-elele ihe osise na-enyekarị aka icheta ma kọọkwa banyere ya ọhụụ nke ọma. A na-ewere ndekọ ndekọ oge a bụ ezigbo ihe akaebe kachasị dị ka ihe ịdekọ na - achọpụtakwa ozugbo mana enweghị nsogbu. Imirikiti ndị uwe ojii si na PERF nọ ọdụ iji nye nkwanye ugwu a kwenyeere ndị uwe ojii na-arịọ maka ihu ọma na-enye ha ohere ịtụle ọnọdụ a. Ihe niile a na - ebugharị bụ iji hụ ihe kacha mma iji doo anya.
Amụma ga-ekwupụta ogologo oge enwere ike idobe data dị mgbe ị na-edekọ eserese ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ndị isi were ha kọwaa ha site n'ụdị mmemme ha bụ n'ezie, nke a bụ otu ụzọ kachasị mma maka nhazi. Banyere ogologo oge enwere ike idebe ihe ngosi gosipụtara site na iwu obodo na-achịkwa mpaghara ahụ. Ọ bụ ezie na data ndị na-abụghị ndị ọrụ ụlọ ọrụ kwesịrị ịtụle mkpa ọ dị iji chekwaa eserese iji kwalite nghọta na inyocha mkpesa, imirikiti ndị PERF kwetara idobe data maka ụbọchị 60-90 tupu ehichapụ ya.
Ndị ọrụ nwudoro ịdekọ na igwefoto ihe omume achọrọ ka edekọ maka ya ga-ekwu okwu ebe a na-edekọ ihe kpatara na ha edeghị ihe omume ndị dị mkpa., Nke a bụ ụzọ ijide ndị ọrụ ga-aza ajụjụ maka omume ha. Ọ na - enyere ndị isi aka ichoputa nsogbu ndị ha chere na ọ ga - eme. Ọ bụrụla ihe a na-achọkarị n'ụlọ ikpe ugbu a, na a ga-etinyerịrị ihe ndekọ vidiyo site na nke a na-etinye akwụkwọ maka ihe mere na anaghị edekọ vidiyo nwere ike inyere aka iwepụ nchegbu banyere ụdị onye ọrụ ndị uwe ojii.
A na-atụ anya ka ndị ọrụ nweta ikike site n'aka ndị ihe merenụ tupu ha edekọ ajụjụ ọnụ maka ha, ọ bụ usoro dị oke mkpa ndị uwe ojii rịọ maka ikike ịdekọ onye ọ tara ahụhụ. Really nwere ike agaghị azọ ije na onye e mere amalite na-agba ajụjụ ọnụ ka ị na-ede ndekọ ahụ. Nke a bụ ihe na - ezighi ezi nke nwere ike ibulite okwu ikpe, ma dọpụta ụfọdụ nsogbu. Ekwesịrị izere ihe a ma nweta ikike mgbe niile.
Na mmachi enweghị mmachi, a chọrọ ka ndị ọrụ uwe igwefoto mgbe niile mgbe ha na-aza oku ndị ọrụ niile na mgbe ndị omebe iwu niile na-enwekwa ihe ọ bụla nwere ike ime mgbe onye ọrụ nọ n'ọrụ, iwu ọ bụla a na-etinye n'ọrụ ga-akọwapụta ọrụ ndị agụnyere na ndekọ aha ahụ, dịka; na-ejide, nyocha na ajụjụ ọnụ. Mgbe ọ bụla onye uwe ojii amachaghị ma ọ ga-edekọ ma ọ bụ, ọ kachasị na ọ na-edekọ. Enwere ike ihichapụ ya mgbe niile mgbe e mechara, ọtụtụ ụlọ ọrụ maara na ọ gaghị ekwe omume ma ọ bụ na ọ nweghị ihe ọjọọ ịdekọ na ụfọdụ ọnọdụ niile siri ike, yabụ, gwa ha ka ha mee mkpesa n'ụdị ederede ma ọ bụ na enwere ike ịgwa ha ka ha kwuo okwu na igwefoto. Enwere ike iji akwụkwọ a iji gosi na ha gbanwere mgbe a kpọrọ ha ka ha gbachitere ihe ha mere.
Ntuziaka emeela kwesịrị ịgụnye njikwa data yana ihe a ga-eme ya ozugbo enwere ya, ekwesiri ime ihe iji gbochie ịpịa data, ihichapụ ma ọ bụ ọbụna ibipụtaghachi ya iji na-enweghị ezigbo nkwado. Ihe omuma ndi a nwere ihe nlebara anya ma kwesiri ka ejiri ya mee otu obula ekwesighi inweta ya. Ọ dị oke egwu na a na-echebe iguzosi ike n'ezi ihe na nchekwa nke ihe nkiri vidiyo. Strategieszọ ụfọdụ a ga-esi rụọ ọrụ iji hụ na nke a gụnyere: iji usoro nchekwa maka data nwere ụzọ nyocha azụrụ azụ, ịrịọ maka ndị isi mgbe ị na-ebudata ihe omume nke onye uweojii na-arịọ na-etinye aka ma na-eduzi nyocha nke nyocha na nyocha ndị e mere na nke a. ihe onyonyo vidiyo.
Ndị otu ụlọ ọrụ ga-enwerịrị otu ụkpụrụ ga - agbanwe agbanwe ma doo anya mgbe a na-ahapụ ịhapụ ihe ndekọ edere na mpụga ebe a na-ahapụrụ ndị mmadụ ihe nkiri vidio a ma ọ bụ nye ndị nta akụkọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-agbaso iwu ngosipụta nke steeti. A na-atụ aro ka etinyere iwu mgbasa ozi sara mbara iji kwalite omume na ngosipụta omume. Agbanyeghị, ọ dị mkpa na ụlọ ọrụ kwesịrị iburu n'uche okwu gbasara nzuzo tupu ha ekpebie ịhapụ ọkwa ọha na eze. Ọtụtụ n'ime iwu ndị a kwesịrị ịgụnye mgbochi nke ịnweta vidiyo na-akwadoghị ma ọ bụ ọbụna wepụta.
Mmemme igwefoto ahụ na-eyi na ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa, atumatu na ndụmọdụ ndị a chọrọ ngwa ngwa iji duzie ihe n'ụzọ ziri ezi.
Nzuzo 5486 1 Echiche Taa